थप र हाकिमहरूले आफ्नो कर्मचारीहरु तिनीहरूलाई अघि सेट कार्यहरू, र कसरी व्यापार घण्टा प्रयोग गर्न सामना कसरी प्रभावकारी प्रश्न, सोचिरहेका छन्। धेरै प्रणाली र डेटाबेस विकास गतिविधिहरु ट्रयाक राख्न। तर संगठनको काम सिधै सम्बन्धित छ घटनाको बारेमा के यात्रा गर्न? चढाएको सेवा वा सामानहरू विशिष्ट ग्राहक वितरित कि कर्मचारी समय कसरी ट्र्याक गर्न? सेवा "मेघाफोन" "नियन्त्रण फ्रेम संग" (जस्तै, ग्राहकको विशिष्ट ठेगाना गएर) इच्छित उद्देश्य प्राप्त कर्मियों को आन्दोलन, विशेष वाहन, ईंन्धन खपत, नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यस लेखमा यो सेवा को एक विस्तृत विवरण, साथै बिलिङ र प्रयोगको अवस्था दिइनेछ।
कम्पनी सेवामा "मेघाफोन" "फ्रेम नियन्त्रण" बाट कसले लाभ उठाउन सक्छ?
यो विकल्प सर्तहरू अन्तर्गत यो केवल सक्रिय कर्पोरेट ग्राहकहरु। त्यसैले, यस्तो प्रस्ताव रुचि हुन सक्छ गर्नेहरूलाई हुन्: रसद कम्पनीहरु, ढुवानी सेवा संगठनों यातायात, ट्याक्सी र अन्य संस्थाहरु मा लगे, एउटा तरिका वा अर्को मा आन्दोलनहरु संग जोडिएको जो कर्मचारीहरु को गतिविधिहरु।
सेवा "फ्रेम नियन्त्रण" "मेघाफोन" निम्न सुविधाहरू समावेश:
दास को स्थान बारे जानकारी (सूचना हस्तान्तरण ठाउँ अनुसूचीमा, सेट अन्तरालहरुमा, अनलाइन मोडमा प्रयोगकर्ता को अनुरोध मा लाग्न सक्छ - सेटिङ पूरा गर्न सेवाको वेब इन्टरफेस वा विशेष डिजाइन आवेदन मार्फत एक उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ)।
सिर्जना र इन्टरनेट मार्फत कर्मचारीहरु सन्देशहरू पठाउने (मल्टिकाष्ट वा व्यक्तिगत सन्देश पठाउने संभावना प्रदान)।
अनुगमन कर्मचारी समय काम को कार्यान्वयन (विस्थापन फ्रेम इतिहास उपयुक्त पत्रिका र माग रेकर्ड गरिएको छ अवलोकन गर्न सकिन्छ)।
जानकारी पढ्न वाहन स्थिति हेर्ने देखि इन्धन सेन्सर मार्ग पत्ता लगाउन।
नक्सामा खोजी वस्तु वितरण / आगमन को मामला मा कर्मचारीहरु रिमोट सहायता प्रदान गर्ने।
त्यसैले नक्सामा एक विशेष कर्मचारी परिभाषित बिन्दु प्राप्त, र को सूचनाहरू बाहिर पठाउने ग्राहक स्थान को परिभाषा,: थप मापदण्डहरू को एक नम्बर पनि उपलब्ध छैन।
जडान कस्तो छ?
माथि उल्लेख गरिएझैं विकल्प "मेगाफन", "फ्रेम नियन्त्रण" मात्र कर्पोरेट ग्राहकहरु लाई उपलब्ध छ। सक्रिय यो मोबाइल अपरेटर को समर्पित स्रोत मार्फत हुन सक्छ - कर्पोरेट पोर्टल। यहाँ तपाईँले सेवा "नियन्त्रण फ्रेम" फेला पार्न र यसलाई किन्न आवश्यक छ। विकल्प वित्तीय अवस्था सन्दर्भमा, ती हुन्:
सेवा को सक्रियता (कनेक्शन को संख्या बिना) चार्ज छैन।
दैनिक भुक्तानी दुई rubles, "पछि" एउटा व्यक्ति मात्र आवश्यक हुनेछ (थप दुई rubles भुक्तानी गर्न प्रत्येक पछि व्यक्ति को लागि हुनेछ) भनेर प्रदान गरिएको छ। त्यसैले, तपाईं7मान्छे को आन्दोलनहरु ट्र्याक गर्न चाहनुहुन्छ भने, मासिक शुल्क प्रति दिन 14 rubles छ। वाहन / दिन प्रति 13 rubles को दरमा - बिलिङ वाहन को स्थिति बाहिर अलग लगे छ।
सेट मासिक शुल्क समावेश नक्सामा कर्मचारी को स्थिति निर्धारण गर्न दुई निःशुल्क अनुरोध (सबै पछि अनुरोध एकै समयमा, भुक्तानी गरिनेछ त्यहाँ थप कम भन्दा तिर्न हुनेछ)।
तपाईं सेवा अपरेटर मोबाइल परीक्षण अवधि प्रदान सक्रिय हुँदा -5दिन, जुन बेलामा तपाईं, "मेगाफन" विकल्प "नियन्त्रण फ्रेम" को संभावना यसको लागि तिर्ने आदि बिना सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ .. प्रयोगकर्ता लागि निर्देशन पनि सेवाको सक्रियता पछि अपरेटर द्वारा प्रदान, र तपाईं प्रयोगकर्ता जान्नु आवश्यक छ कि सबै आवश्यक कुराहरू, संयुक्त प्रश्नहरु, सेवा व्यवस्थापन मार्फत उपलब्ध स्रोतहरू लिङ्क समावेश गरिएको छ। थप जानकारी पनि विकल्प व्यवस्थापन मार्फत उत्पादन जो पोर्टल, मा प्रदान गरिएको छ।
सेवा "फ्रेम नियन्त्रण" "मेघाफोन": समीक्षा
एक निश्चित सेवा प्रयोग गर्नु अघि, सदस्यहरू अक्सर पहिले नै पूर्ण तागत र कमजोरी पहिचान गर्न, आफ्नो क्षमताहरु आकलन गर्न व्यवस्थित भएकाहरूलाई मान्छे को राय रुचि राख्नुहुन्छ। यस कम्पनीको विकल्प बारे टिप्पणी लागि जाँदा, "मेगाफन" "नियन्त्रण कर्मचारी", तिनीहरूले बरु विरोधाभासी छन्। वस्तु आफ्नो लक्ष्य 100% बुझ्न, यो असम्भव छ: केही ग्राहकहरु स्थान को संकल्प मा हालको अनिश्चितता जसको अर्थ, एकदम प्रभावशाली छ भन्ने तथ्यलाई को मामला मा यो सेवा गर्नु बेकार छ भन्छन्। कर्मचारीहरु शहर बाहिर यात्रा गर्न छ भने यो पनि अप्रभावी छ। स्थान संकल्प मार्फत बाहिर छ देखि आधार स्टेशन, सानो आफ्नो सेट, ठूलो त्रुटि उत्पादन गरिएको छ। एक ठूलो, भीड शहर भित्र, यो समस्या धेरै हदसम्म अनुपस्थित छ।
दल र आवश्यक गुणहरू लागि विचार
यसलाई आफ्नो गिनी पिग नुहाउने गर्न सम्भव छ?